Dukaamada Ku Fududee Waxay Rabaan In Ay Ku Iibiyaan Xashiishadda Ameerika • Daroogada Inc.eu
Ururka ganacsiga Mareykanka ee 'bakhaarrada raaxada' ayaa rumeysan in dukaamada iibiya biirka iyo sigaarka sidoo kale loo oggol yahay inay iibiyaan xashiishadda. La siiyay in aqoonsiga macaamilka la codsaday.
Bal qiyaas waxaad ku socotid dukaanka xaafaddaada iyo xayawaanka horay loo soo xiray iyo xashiishka edibles iibso, sida caadiga ah waxaad gelisaa baako sigaar ah ama lix-baako oo brew ah oo ku yaala dambiyada. Haddii Ururka Qaran ee Waxtarka Karti-gelinta (NACS) uu helo habkan, tani waxay noqon kartaa mid dhab ah Mareykanka.
NACS ma laha dib u habeyn muraayad ah oo ku saabsan ajandaha mana rabo in ay farageliso sharciyeynta cannabis. Si kastaba ha noqotee, marka mamnuucidda federaalka ee cannabis, hay'addu waxay aaminsan tahay in dhamaan siyaabo macquul ah dukaamada ay u qalantaan gabal tufaaxan. Markuu sharcigan ka baxo waxaad u tagtaa wadajirka, edibles iyo CBD-Waxaad soo saartaa oo kaliya raashinka dukaanka. Xaqso sax ah?
Akhri wax dheeraad ah greenent ganacsur.com (Source, EN)
Sideed ku ogaaneysaa nooca qiyaasta CBD ee ay tahay inaad qaadatid?
Xaqiiqdii waxay kuxirantahay dulqaadkaaga iyo xaaladaha aad rabto inaad wax kaqabato, laakiin halkan ...
Waxyaabaha aadan ka ogayn CBG (Cannabigerol)
Daraasadihii ugu dambeeyay waxay muujinayaan natiijooyin rajo leh Mid ka mid ah dhinacyada ugu caansan ee xashiishadda ayaa ah mid aad u weyn ...